Ugwu Andes na Venezuela | Njem zuru oke
Otu n'ime ugwu kachasị mma ma saa mbara na ụwa bụ Ugwu Andes. Ọ obe ọtụtụ mba South America na njem a ngụkọta nke Ogologo 8500s nke ezigbo mma ...
Otu akụkụ ugwu a na-agafe Venezuela, ọ bụ nke a na-akpọ Northern Andes: oke ugwu dị egwu na-agabigakwa Colombia na Ecuador. Ma taa, anyị ga-elekwasị anya naanị na Ugwu Andes nke Venezuela.
1 Ugwu Andes
2 Nlegharị anya na Andes nke Venezuela
Nke a ọ bụ ugwu ugwu kachasị dị ogologo n'ụwa ma nwee ike kewaa ya na ngalaba atọ, ndị Northern andesnke Otu ulo ukas na Ndịda Andes.
Ugwu ugwu Andes, ndị kpọkọtara anyị taa, erughị kilomita 150 n’obosara na ịdị elu ya dị mita 2500. Ndị Andes nọ n’etiti ahụ sara mbara ma dị elu.
Ugwu Andes, a na-akpọkwa ugwu ugwu, Ha sitere na Barquisimet - Carora depression, na Venezuela, na ala Bombón, na Peru. Obodo Venezuelan dika Mérida, Trujillo ma obu Barquisimeto, di n’elu ugwu ndia di nkpa.
Ebe ugwu ndị a gafere, ọdịdị ala nke Venezuela na-enwetakwu njirimara onwe onye. Enwere ala dị larịị na elu oke osimiri mana enwekwara elu elu, ọ bụ ya mere enwere ọtụtụ agba na ọdịdị ala nke na ọ magburu onwe ya.
Ugwu Andes dị na Venezuela nwere isi ihe atọ: the Sierra de La Koulata, Sierra Nevada na Sierra de Santo Domingo. Ha ruru ebe dị elu ruru mita 5. Ọmụmaatụ, kasị elu elu na mba bụ ebe a, ya 5.007 mita, na Bolivar elu. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ dịkwa ezigbo mma dịka Humbold nke nwere mita 4-940, Bompland nwere mita 4880 ma ọ bụ ọdụm ya mita 4.743.
Ihu igwe na-agbagharị n’agbata otu polar, dị nnọọ elu, na ọnọdụ ihu igwe kacha sie ike na ụkwụ nke ugwu. Mmiri na-ezo, dị ka ala ahụ dum, site n'April ruo Nọvemba. Osimiri na-agafe n'etiti ugwu, nke na-enweghị ike ịnyagharị n'ihi na ha dị mkpụmkpụ ma nwee mmiri iyi. Mmiri a na-ejedebe na ite mmiri abụọ: n'otu aka, nke dị na Caribbean, site na Lake Maracaibo, na nke ọzọ, Orinoco, site na Osimiri Apure.
Ahịhịa nke mpaghara ahụ dịkwa n'okpuru ihu igwe, na ihu igwe, anyị amataworị, nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na elu. Enwere ụdị ahịhịa na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ nke ukwuu na mita 400 mbụ nke elu, wee pụta Nnukwu osisi, nke dị elu karịa 3 puku mita ohia, dị elu karịa ahịhịa ndụ Paramera na karịa 4 puku mita anyị nwere mosses na lichen.
Andes nke Venezuela si otú a mejupụta naanị otu mpaghara nwere ụdị osisi dị iche iche na mba a. Na mpaghara nwere nnukwu osisi, n’agbata mita 500 na 2, odida obodo dị ka oke ọhịa mmiri wee nwee osisi cedar, laurel, bucares, mahogany ... Ọ mara mma, n’ihi A na-egosipụta ụdị osisi a na anụmanụ.
Na Venezuela Anduna nwere anụ ọhịa bea, onye ama ama nke Andes (Ọ bụ ezie na ọ naghị ebi ebe a, ọ na-agabiga mgbe niile), okpu okpu, akwa ụkwụ, mgbada, shrews, rabbits, nwamba ọhịa, ugo ojii, ewu, ikwiikwii, ilo, okpo eze, ndị na-egbu osisi, ọbọgwụ, iguanas, agwọ, ngwere na dorados na guabinas, n’etiti ụdị azụ.
Mgbatị nke Andes nke Venezuela na-eme n'ikwu okwu banyere geopolitically ha gafere ọtụtụ steeti nke mba ahụs: Barinas, Apure, Portuguesa, Táchira, Mérida na Trujillo. Dịka anyị kwuru n'elu enwere ọtụtụ obodo ndị dị mkpa dịka Mérida, Trujillo, Boconó, San Cristóbal ...
La akụ na ụba nke mpaghara eji itinye uche na kọfị kọfị na ọrụ ugbo, mana mgbe nchọpụta nke mmanụ ihe gbanwere. Ọ bụghị na ihe ọkụkụ akwụsịla ịme, n'eziokwu site na ebe a ka mmepụta nduku, mkpo, osisi mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, unere na celery, ezì, anụ ọkụkọ na ehi maka ahịa mpaghara, mana taa mmanụ bụ eze.
Nlegharị anya na Andes nke Venezuela
Ọ bụ ezie na ogologo oge akụkụ a nke Venezuela na-anọghị na njem, anyị na-emetụta mba ahụ mgbe niile na Caribbean, ruo oge ụfọdụ, ọ meghewo ọrụ a. Ndozi nke akụrụngwa nkwukọrịta (ọfụma ụzọ dị mma n'ime iri afọ ndị gara aga) bụ injin.
Ọ bụ ezie na nnọpụiche nke a kpọrọ ndị a na-akpọ ndịda agbada mere ka ha ghara inwe ego ndị njem na-ahapụ, n'ụzọ ụfọdụ o nyeere ha aka ịba uru nke ukwuu maka ahịa a taa. Ma nke ahụ bụ nkewa ichekwala ichebe ihe niile gbasara ụmụ amaala ha na iche iche.
Ndị bi n'akụkụ a nke obodo na-akwado a njem nlegharị anya, mmetụta dị ala, nke na-echekwa ụzọ ndụ ha na gburugburu ha. A njem nke dị n'aka ndị mmadụ n'onwe ha ma ọ bụ njem nlegharị anya nke anyị nwere ike ịkpọ obodo.
Anyị nwere ike ikwu banyere ụfọdụ Ebe ndị a tụrụ aro ka ị gaa ebe a na Andes nke Venezuela. Ọmụmaatụ, obodo nke Merida. E hiwere ya na 1558 ma nwee ihe mara mma okpu agha colonial, ke adan̄aemi ikpọ obot ẹkande enye ẹkụk. Nwere ike ịhụ Achịbishọp Obí, isi ụlọ ọrụ nke Universidad de los Andes, Katidral ma ọ bụ Obí Ọchịchị.
Merida nwere okporo ámá ndị mara mma, mkpụrụ obi nwata akwụkwọ, a ahịa obodo okpukpu atọ na-arụsi ọrụ ike ma na-ewu ewu, ụlọ ime ice cream nwere ihe karịrị 600 ice cream na-atọ ụtọ Coromoto ice cream parlor, na nke aka ya na Guinness Book of Records na ọtụtụ ogige ntụrụndụ na n'ámá. Otu n'ime ogige ndị ama ama bụ Los Chorros de Milla, nwere ọdọ mmiri, nsụda mmiri na zoo.
E nwekwara Égbọ ala USB Mérida nke na-akpọrọ gị Pico Espejo na 4765 mita, dị obere karịa European Mont Blanc. The Los Aleros ndiife Park, na Ogige Botanical ya na ọchị na-eje ije n’elu osisi ... Ma ọ bụrụ na-amasị gị ugwu ị nwere njem na Sierra Nevada ha na elu ebube ha.
Obodo ọzọ a ma ama bụ San Cristóbal, isi obodo steeti Táchira, nke na-erughị mita 1000 nke elu ma ya mere nwere ezigbo mma. Ọ sitere na 1561 ma dịrị nso na ókèala ya na Colombia yabụ ọ bụ nnukwu azụmaahịa. Ọzọkwa, ọ nwere ọtụtụ ụka ndị colonial ị ga-eleta.
Trujillo Ọ bụ isi obodo nke steeti Venezuelan kacha nta. Ọ dị ezigbo mma ma mara mma dị ka steeti niile. E hiwere ya na 1557 ọ dịkwa n’elu elu nke mita 958. A maara ya maka nnukwu ihe oyiyi nke Virgin of Peace, nke nwere ihe karịrị 46 mita na 1200 tọn ibu. O nwere ezi echiche na foto site na ebe a bụ ihe ekwesiri. Obodo ochie ahụ mara mma, nke nwere baroque mara mma na katidral ịhụnanya.
Ebe ndị ọzọ mara mma bụ Jajó, Táriba, Peribeca, Capacho ... ebe ndị a niile nwere ọtụmọkpọ ha na mpaghara gastronomic na ụlọ nkwari akụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ugwu Andes na Venezuela
Kedu ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ọgwụ na India?